JINGYE inggwakọta Tank ka nke igwe anaghị agba nchara, ọtụtụ-eji:
1. industrylọ ọrụ Nri & Ihe ọverageụverageụ, dị ka jam, ihendori tomato, mado, mmiri ara ehi, ihe ọveraụveraụ, mmanya, mmiri ọ ,ụ drinkingụ, wdg.
2. Chemicallọ ọrụ Chemical Chemical, dị ka ude mmiri, shampoo, ude ahụ, wdg;
4. atingdị ọkụ: eletriki, uzuoku;
6.A na-anabata ihe ndị a chọrọ;
1.Adopt nri ọkwa ihe na ịdị ọcha, adịghị ajari, hụ na nchekwa mmepụta.
Enwere ike ijikọ ya site na ọkpọkọ na valves, na igbe njikwa PLC na-akpaghị aka, iji ghọta ngwa ngwa zuru ezu nke usoro mmepụta, chekwaa ụgwọ ọrụ, melite ikike mmepụta, na uru maka ndị ahịa.
Design okpomọkụ (L)
Irgba ọsọ (rpm)
Anyị nwere ike ịhazi akụrụngwa dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị.
Nke gara aga: Retgbaba ụra